Mbugharị kachasị anya nke Galaxy S20 ga-enye anyị ga-abụ 5x | Gam akporosis
Ka izu na-aga, ọnụ ọgụgụ nke posts metụtara asịrị gbara gburugburu Galaxy S20 ha na-eme kwa ụbọchị, ihe a na-ahụkarị mgbe anyị na-ekwu maka ụdị Samsung dị elu. Asịrị kachasị ọhụrụ metụtara ọdụ a metụtara modulu igwefoto.
Dabere na Optrontech, onye nrụpụta akụkụ igwefoto ewetawo Samsung nke anya dị mkpa maka mbugharị anya nke 5x. Acto na Samsung Electro-Mechanics na-achịkọta usoro modulu ikpeazụ maka usoro S20.
Ozi a dị egwu karịsịa ebe ọ bụ na e nweela ọtụtụ asịrị metụtara ikike igwefoto nke Samsung na-esote flagship na nke ahụ kwuru na ọ na-enye mbugharị ngwa anya 10x. Mana ọ dị ka usoro S20 niile ga-enye mbugharị 5x, gụnyere Galaxy S20 Ultra, ụdị kachasị elu na nso nso a.
Onye na-ajụ Elec ahụ, na-ekwu n'otu ụzọ ahụ na akụkọ ya kachasị ọhụrụ metụtara Galaxy S2o, yabụ anyị nwere ike ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na eze kwadoro na Galaxy S20 ga-agụnye mbugharị 5x, mbugharị nke ga-adị na nsụgharị atọ nke ụlọ ọrụ ahụ na-ezube ịmalite: S20, S20 + na S20 Ultra.
Site na ihe mmetụta 108 mpx isi, dịka ọtụtụ asịrị na-atụ aro, mbugharị 5x karịrị ezuru emesịa nwee ike ịme mbugharị dijitalụ na onyonyo ahụọ bụrụhaala na enweghi mmetụta oyiyi, nke a bụ ihe a na-ahụkarị mgbe ị na-ebuwanye ibu.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị mbugharị 10x a na-atụ anya ya, mbugharị 5x nke ga-erute nso S20 nso ọ bụ ezigbo ọganihu ma e jiri ya tụnyere mbugharị 2x dị ugbu a na anyị nwere ike ịchọta na Galaxy S10 na Note 10 nso.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mbugharị kachasị anya nke Galaxy S20 ga-enye anyị ga-abụ 5x
Github weputara ngwa ya dika ihe nlere na gam akporo